News - Control machining ziri ezi nke CNC lathe na mmepụta
Mmetụta nke CNC lathe machining ziri ezi na-abụkarị ihe kpatara ọtụtụ ihe, otu bụ ihe kpatara akụrụngwa, nke abụọ bụ nsogbu akụrụngwa, nke atọ bụ mmemme, nke anọ bụ njehie benchmark, taa Wally igwe teknụzụ ma ị kọwaa nkenke akụkụ.
1. The machining ziri ezi nke CNC lathe mere site na akụrụngwa na-adịkarị kpatara usoro njehie nke igwe n'onwe ya na njehie kpatara site na runout nke akụrụngwa akụrụngwa. Na usoro nke iji akụrụngwa akụrụngwa, a na-eyi akụkụ ndị bụ isi dị ka ihe nkedo ụzọ, na-ebute mmụba nke ọdịiche ahụ, na nnukwu njehie nke akụrụngwa akụrụngwa, nke ga-emetụta nhazi ọrụ nke CNC lathe;
2. N'ime usoro nhazi NC lathe, ọ dị ezigbo mkpa ịhọrọ ngwá ọrụ ịcha. Ekwesighi ngwá ọrụ ga-eduga kwa elu igwe ibu na ngwá ọrụ eyi kwa ngwa ngwa, nke ga-eduga na CNC lathe nkenke ike izute ngwaahịa chọrọ;
3. The enweghị ezi uche ọnwụ kwa set n'oge mmemme bụkwa otu n'ime ihe ndị mere na machining ziri ezi nke CNC lathe-apụghị ekwe nkwa. A ghaghị ịtọ ntọala nke ndepụta na mgbanwe site na ijikọta ngwá ọrụ, njirimara ihe onwunwe na akụrụngwa, iji hụ na ịkpụzi igwe ọrụ nke CNC lathe;
4. Na usoro nke NC lathe nhazi, datum njehie nke ngwaahịa bụkwa otu n'ime ihe ndị mere na machining ziri ezi nke CNC lathe ike izute chọrọ. Site na nchikota nke ịtụgharị na egwe ọka, oge ịpịkọta ọnụ nwere ike belata dị ka o kwere mee, nke nwere ike belata mmetụta nke nhazi nke abụọ na ịhazi akụrụngwa nke CNC lathe kpatara mgbanwe nke datum.
Ihe edere n'elu bụ teknụzụ igwe volley maka mmadụ niile ịkekọrịta na isiokwu nke CNC lathe machining ziri ezi, na-atụ anya ịnye ndị na-arụ ọrụ CNC ka ha rụtụ aka.